LAWYER KWI-INTANETHI - LAWYER UKUPHENDULA KWI-MANANI
kuthengiswe ngam i company ukuba Ilifa
Umnini akavumelekanga ukuba oppose ukuba ubukho buka-yokusasaza ngeenjongo zokurhweba ukuqeshisaukuba ngexesha elinye. usapho umthetho. umtshato kunye nempahla regime ye-amaqabane. communion esemthethweni. ingqokelela ka-iingeniso. default ye-borrower. i-code of zasekuhlaleni umgaqo-nkqubo. statute ka-kwemida. kwaye revocation yamalungelo. leases kwaye kungaboniswananga. condominium Inkampani abantu kwaye eyinkunzi ezidweliswe kwi-stock exchange kwaye hayi. iyabala kwaye budgeting.
ipropati imiba malunga lendlu kwaye real amalungelo
unondyebo kwaye irhafu yengeniso. irhafu audits kwaye ibongoza. irhafu ikhomishini. securities credit. imithetho eyilwayo ka-exchange kwaye cheques. Izivumelwano zengqesho. resignations kwaye dismissals. ubudlelwane phakathi ye-ummi kunye INPS kwaye INPDAP. intswela-ngqesho izibonelelo. intswela-ngqesho kwaye earnings. bullying kwaye yolwaphulo-mthetho entsimini yengqesho umthetho uza ukukhusela kukuwahlengahlengisa ukusuka na kakubi yakho umqeshi. Bhala kuthi kakhulu elula: nqakraza"Isicelo esemthethweni ingcebiso". okanye thumela umbuzo wakho ngqo kwi bhokisi kwaye Thumela zethu bhokisi.
yonke into enako kuluncedo ukuba akuncedise ukusombulula ingxaki Wafumana i-imeyili ye-caphula. ukwenza intlawulo kuya kufuneka ufake kufuneka isixa-mali ezingama-menu: 'Imali yakho ingcebiso' kwaye nqakraza iqhosha 'imali ngoku'.
Free Isemthethweni ingcebiso - Fumana efanelekileyo Lawyer yakho meko okanye buza Umbuzo wakho simahla
Uhlobo losasazo lwedijithali iqonga Conlegra wazalwa ngenjongo simplifying ubomi kunye Practitioner, abo baya kweelwimi-ifumana kuphela yakhe competence kwaye professionalism, kunye ummi, apho rhoqo relies kwi elinolwazi ezingachanekanga ngokucetyiswa umhloboSisebenzisa emva kunye omtsha iqela le-software development nako appo kuma - umsebenzi kufuneka wenze zedijithali iqonga kuba highly innovative, esebenzayo intuitive. Kufuneka i-isemthethweni ingxaki kwaye andazi njani ukufumana indlela yakho jikelele. 'Conlegra ufumana i-innovative zedijithali iqonga lonto iyanceda ufuna ukufumana a Lawyer suited yakho kunjalo, okanye ngokulula schiarirti i-izimvo kwi-isemthethweni entsimini.
Umbuzo kuba Lawyer
Pollution ufumana i-ububi zethu phinda-phinda
Ukuba co-umnini uyaphumelela a lawsuit ngokuchasene condominium kufuneka ahlawule kanjalo abo phakathi kwezinye flats kwaye dissociatedkwaye abo nje abstained. Kwaye ke ukuba sithenge indlu kwaye kwindawo yokusebenzela ukuphazamisa ngokwenza lwezempilo, sibe ukuva ukuba ukuphendula ukuba akukho bani ngaphambili kwi-iminyaka emininzi yena zange complained. ingaba I-lawyer Durelli ngokuphonononga kuthi ukukhusela ngokwethu ngeendlela ezininzi iimeko, kubalulekile ixesha ukubona elinesihlanu episode incwadi Umbuzo we-Lawyer, lwenziwa ngumlawuli journalist ka-Zenazone Erika Mariniello. Ingxolo of road traffic, highway, railway, airport umculo, soloko high-neighbors nelikhwazayo, kwaye ngoko ke, ngamanye amaxesha amaninzi disturbing lwezempilo. Kwaye' injongo usamuel, ukuziva ungenakumela nto, kwaye ngamanye amaxesha izifo, kwaye worsens umgangatho ubomi bethu. Kodwa nemithetho nemiqathango ukuba zithe ekhutshwe, kunye umthetho ukuba lisoloko ngakumbi attentive kwaye elinovakalelo kulo mbuzo, kuvumela ukuba react ngempumelelo kwaye ichiza lezolimo, kunye malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-ukufumana imbuyekezo kuba umonakalo intlungu.
Ngelizwi lawyer lubonisa umntu nge iqondo lokuqala kwi-mthetho uze ungeniswe kwenkundla Xa ukhethe wenza ukhetho lwakhokhuphela ne cola ikhowudi ngasentla Le ilandelayo ngokunxulumene ukhetho lwakho.
Umthetho ifemi Marro - Administrative Umthetho, ulwaphulo-Mthetho, Zasekuhlaleni, kwaye Military - military Lawyer
Umthetho Ifemi ke zasekuhlaleni Lawyer
sele elide amava kwi-Military UmthethoYolawulo Umthetho.
Zasekuhlaleni Umthetho kwaye Wolwaphulo-Mthetho Imizamo inikeza ezininzi umyalelo wokhuselo iinkonzo.
kwaye isemthethweni ingcebiso kwaye ukukhuselwa kunye matyala yabasebenzi ye-Armed Imikhosi (Umkhosi. Guardia di Finanza kwaye Amapolisa Inyanzelisa ukuba zasekuhlaleni ukuze - (amapolisa. Urhulumente Amapolisa kwaye Entolongweni Amapolisa): collective iintshukumo kwaye umntu ukuba TAR (imisebenzi yoluntu jikelele. demolition imisebenzi. uxwebhu msebenzi kuba military.
unikezelo kwi military kwaye wonke sebenzisa jikelele.
amanyathelo xa military kwaye amapolisa imikhosi. izenzo inkonzo kwaye elifanelekileyo imbuyekezo. Isibheno ukuba Kwequmrhu Likarhulumente.
ulwaphulo-mthetho lawyer kwaye amministrativista BROWN
nezibheno kuphunyezwe. khetha Recourses. Uphando ka-yenza zenkonzo. victims of umsebenzi kwaye victims of terrorism. xa isenzo kwaye Uxwebhu osemqoka. Unikezelo kwi umbuzo. Unikezelo ka-igunya kokusingqongileyo incompatibility. Ukhuselo ye-defendants phambi kokuba Inkundla kwi-nokuqheleka. ulwaphulo-mthetho kwaye military Iinkundla ka-geronacity in italy. Eroma kwaye Naples. Pleadings kwaye constitutions ka-zasekuhlaleni. usapho Umthetho (separations. umntwana ongamzalanga abe ngowakho. kwaye road traffic.
Inkundla ka-isibheno (okanye inkundla isibheno), abaninzi nezomthetho, inkundla linalo igunya yenze isigqibo malunga nezibheno ngokuchasene izigweboInkundla ka-isibheno, kuba inkoliso yawo, iimeko zasekuhlaleni kusenokuba umahlule kwi eziliqela 'amacandelo', 'amagumbi', okanye efanayo. Kukho kusenokuba enye inkundla okanye ezininzi iinkundla, ngamnye unoxanduva a bekhamera mmandla (umzekelo, kwi-Italy kukho amashumi amabini anesithandathu izithili Wenkundla ka-Isibheno) eyodwa, liphi na inkundla yokugqibela isehlo. Kukho kanjalo zinokuba iinkundla ka-isibheno ezikhethekileyo kolawulo lwesixeko limited ezithile imicimbi: cinga kweenkundla ka-isibheno, i-administrative isifrentshi okanye military Inkundla isibheno kwi-Italian. Rhoqo, inkundla isibheno ingaba inkundla yesibini isehlo, wabiza lokugqiba njengoko ngenxa isibheno ka-isihlalo esikhutshwe inkundla kuqala isehlo yayo, isigqibo kusenokuba appealed ngokuchasene kwi-supreme inkundla okanye inkundla cassation, njengoko inkundla yokugqibela isehlo. Kwezinye ongabhalwanga phantsi imida, nangona kunjalo, inkundla isibheno (okanye inkundla nezibheno) inkundla lokugqibela isehlo, kwaye, kule meko, designation lesiqu inkundla kusenokuba attributed ukuba inkundla thoba ibakala (ngoko ke kule Imeko sasenew York, xa Texas kwaye Oklahoma kuba inkundla yokugqibela isehlo kuba zasekuhlaleni, supreme inkundla, kwaye enye, ulwaphulo-mthetho, inkundla, ulwaphulo-mthetho nezibheno). Kwi-nezomthetho ka-zasekuhlaleni umthetho, inkundla isibheno, ngokubanzi, i-yovavanyo wenkundla, ngenxa yokuba lugqiba kuyo yonke imiba kunjalo, kunye kwimibuzo ka-fact njengoko kwi abo ekunene, besomeleza i ubizo: ngu-contested okanye ukutshintshwa kuya kunye layo. Ngokufanayo umthetho imida, nangona kunjalo, inkundla isibheno kufuneka limited amathuba uhlole ngemiba ngenxa yokuba kumiselwe yi - ubizo: contested, kwaye ngoko ke ingaba essentially lwabagwebi ka-legitimacy. Kanjalo kwi-nezomthetho ka-communist states, isibheno tends ukuba kulinganiselwa ulawulo kuphela legality ka-isihlalo phantsi isibheno Ngaphandle judging kwi isibheno, inkundla isibheno babe baqhuba kakuhle kakhulu kuba linalo igunya njengoko inkundla kuqala isehlo kuba ezithile subjects.
Ezintathu imithetho Mendel kwaye ilifa lomthetho iimpawu: imithetho genetics
Genetics sele kuba science zonke iziphumo: namhlanje, sonke siyazi ukuba hereditary iimpawu ngamnye zimiselwe ngumthetho genes, apho zibekwe khona kwi-chromosomes, eziya DNA amacandeloUkuba, nangona kunjalo, namhlanje siyazi zonke ezi zinto zenza imibulelo Gregor Johann Mendel, abo ngomnyaka wesibini nesiqingatha i- ke siqulunqe ezintathu ezisisiseko imithetho genetics yi-identifying ntoni umthetho lo ilifa lomthetho iimpawu i-the new izizukulwana abantu. Mendel ke imithetho yesichumiso kunye kwezidalwa eziphilayo eziguquliweyo (izilwanyana, kuquka humans, kwaye bamele a ukuguqula incopho kwi-ukuqonda i-phenomenon obaluleke kakhulu, isiseko ubomi. Kunjalo, Mendel kwafuneka emnqamlezweni ngakumbi kwaye amaxesha amaninzi ezahlukeneyo ke ngoko phambi reaching ezithile iziphumo kwaye akwazi ziqulunqe ezintathu imithetho, ngobukho fact ukuba imithetho isenzo sempumelelo zibonakalisiwe kwi enkulu amanani. Xa, nangona kunjalo, ugqibile umsebenzi wakhe, u-Mendel ke imithetho baba formulated kwi-olugqityiweyo indlela kwaye sinako? ukwakha kwezi kwalomgaqo-siseko uphando ka-genetics. Ukususela crossing ezimbini nyulu imigca ukuba differ kuba uphawu olunye, ufumana u'a isizukulwana sokuqala apho abantu exhibit lunye kuphela isibini phenotypes kwi-parental (dominant uphawu). Yesibini ka-Mendel ke umthetho, kanjalo ngokuba Umthetho Segregation, iqala kwi ukungena ukuba ngamnye uphawu izimisele nge ifekta (i-gene), apho kukho ezimbini ezahlukeneyo iifomu (alleles), kwaye ifunda njengokulandelayo: Wonke umntu carries kunye ngokwayo, nganye gene, ezimbini ezahlukeneyo alleles. Ngexesha nokuzala, alleles efanayo gene eyahlukileyo kule gamete ukumiselwa kwebandla Oku kugqiba genotype enako heterozygous okanye homozygous. Wesithathu ka-Mendel ke kubalulekile kananjalo ngokuba Umthetho Ulungiso-Geqe kwaye ifunda njengokulandelayo: Ngethuba ukumiselwa kwebandla gametes, ezahlukeneyo genes zisasazwa ngokusecaleni kwendawo omnye nomnye. Kwixesha elizayo izizukulwana, ke ngoko, hereditary imibandela unako kubonakala independently, ukudibanisa ngokwahlukileyo ukususela oko waba elindelekileyo. Njengoko kuchazwe kwi-yokuqala ka-Mendel ke, dominant iimpawu koyisa phezu recessive genes, kwaye oku kuthatha indawo hayi kuphela pea izityalo, kodwa kanjalo kuyo umntu wolunye uhlanga. Iimpawu ingaba recessive (njenge-blue amehlo) manifested kunyana kuphela kwimeko ufumana enye inyanga ukusuka bobabini abazali. Kungenjalo, kuya kusoloko kuba dominant omnye kuvela isizukulwana sokuqala.
kwaye, ngaphandle kwezo zichazwe kwi-hayi
Personal injury, wolwaphulo-mthetho, ulwaphulo-mthetho ezibonelelwe ngu-aphye-Italian, ulwaphulo-mthetho wokuziphatha, ngokunxulumene apho."Nabani na yenza nawuphi na personal nokonzakala kwabo, ukusuka apho ke derives a ukugula kwi umzimba okanye engqondweni, wayesohlwaywa kunye nokuvalelwa ukususela kwiinyanga ezintandathu ukuba kwiminyaka emithathu ezayo. Ukuba isifo ubani ixesha na ukudlula amabini imihla, kwaye andisayi kuba negalelo na aggravating iimeko kumiselweyo kumgaqo-aph. omnye kwaye yokugqibela inxalenye inqaku, ukona ngu punishable kwi isikhalazo ye-offended umntu."Injongo ye-ulwaphulo-mthetho kwi umbuzo uthi lwesiqu injury inflicted ngomhla omnye okanye ngaphezulu subjects, apho sisifo ye-lesion akusebenzi necessarily kufuneka ibe violent, oku ekubeni wenza yi-intshukumo, ukushiya isenzo okanye usulelo. Kuphela isiganeko ye-ulwaphulo-mthetho kuphela isifo wenza, njengoko lesion kuphela nomen iuris ye-ukona. I-conception ka-sifo sixhaphake wachaza yikomiti yabaphathiswa Ingxelo kwiphulo, kwaye iqulathe kwi-alteration ye-anatomical okanye lwempahla ethengiswa umzimba. I-conception, nangona kunjalo, debated yi-imfundiso, njengokuba isifo yi pathological imeko apho unyango ukuba kukhokelela ixabiso, curable okanye hayi curable ukuba yenza ubomi-isimbo utshintsho, hayi curable, injongo ukufa. I conception ka kakhulu abalandela kwaye yenziwe yi-elo inzululwazi, linalo igunya kulo mba, uqwalasela isifo kwi umbuzo yi pathological nkqubo, acute okanye chronic, yobulali okanye disseminated, apho iziphumo i-appreciable wokubandezeleka kwaye lwempahla ethengiswa ye-sasemzini. I-buchule kufuneka sixhaswe intando kwaye predictability sehlo, ngoko ke kulindeleke ukuba ngamnye imeko apho umtyholwa foresees ukuba bakhe intshukumo ayikwazi iziphumo i-injury ukuba lwesiqu nasengqondweni le nomonde, igqiba, nangona kunjalo, ukufumana ngalendlela kulungile okanye iindleko.
bis) · ngesondo Izenzo kunye encinci (aph
Kubalulekile nje ityala uchaze ukuba umntu othe wanikela ulwaphulo-mthetho kunye injongo ukubulala, kuba netyala zezikomiti babulala. Personal nokonzakala kwabo bamele ebalulekileyo kwi kwaye kungokuzithandela negligent. I-unintentional nokonzakala kwabo ikholisa netyala kuba lawsuit, kodwa ngokulawulwa prosecution-ofisi ukuba bayagwetywa negosa illnesses okanye ezinzima okanye ezinzima kakhulu nokonzakala kwabo lwayo oluvela neengozi emsebenzini."Nabani na wenza ngokusebenzisa ukungakhathali, personal injury, uya kuba wayesohlwaywa kunye nokuvalelwa phezulu ukuya kwiinyanga ezintathu okanye nge kakuhle kutsho kwi. Ukuba injury kukuba buhlungu i-esangezelelweyo ngu nokuvalelwa ukusuka kwelinye ukuya kwiinyanga ezintandathu okanye imiqathango ukusuka ukuba, ukuba kunzima ezinzima, nokuvalelwa ukususela kwiinyanga ezintathu ukuya kwiminyaka emibini okanye imiqathango ukusuka ukuba."injury ubomi, ebangela infiltration ka-hemorrhage kwi-tissues kwi ephikisana ka-imisikeko i-mortem, apho igazi koxinzelelo zero, ngenxa yokuba isangqa yaphukile. Kwi-isidumbu kanjalo emva elinesihlanu iiyure ukufa igazi, yi-umbizane womhlaba, flows kwi sloping kwiindawo umzimba, ebangela amachaphaza hypostatic, ezi kusenokuba differentiated ukusuka esopha inyaniso kunye acupressure, kwimeko amachaphaza hypostatic ihlala ekhanyayo nyathelo ye-ngomnwe, kungenjalo umbala uya kuhlala ayitshintshanga. Kuxhomekeke zemozulu, amachaphaza kuba ngomhla wokuqala a rosy umbala ukuba oluhlaza (kubekwa kwi-yahlukile diagnosis kunye pleural bile). Yolwaphulo-mthetho ngokuchasene personal inkululeko: Seizure ye umntu (aph.) · mthethweni Arrest (aph.) · Ngokukhawuleza kwemida of personal inkululeko (aph.) · Kakubi nokuxhatshazwa igunya ngokuchasene ababanjiweyo okanye detained (aph.) · Ukukhangela kwaye le ngxelo of personal ngokuzithandela (aph.) · ngesondo Udushe (aph. quater) · Urhwaphilizo a encinci (aph. octies) · Solicitation ka-minors (aph. -undecies) yolwaphulo-mthetho ngokuchasene kwendlela inkululeko: private Udushe (aph.) · Threat (aet.) · stalking (aph. ezintandathu kwaye abalishumi elinesibini bis) · Imo incapacity procured ngokusebenzisa udushe (aph.) Offences ngokuchasene inviolability ka-ekhaya: ukwaphulwa komthetho domicile (aph.) · ukwaphulwa komthetho domicile sizibophelele nge-wonke igosa (aph.) · mthethweni Kokuphazamiseka yangasese ubomi (aph. bis) · nabangenamvume Ukufikelela ikhompyutha okanye telematic system (aph. obona bungakanani) · ulawulo okanye unikezelo ka-unauthorized ukufikelela codes ukuba ikhompyutha okanye iindlela telematic communications (aph. quater) · Dissemination ka-izixhobo, izixhobo okanye ikhompyutha iinkqubo intended ukuba umonakalo okanye phazamisa ikhompyutha okanye telematic system (aph. quinquies).
Isemthethweni aid - abaqondisi-mthetho uvimba weefayili - Ukulandelelana abaqondisi-mthetho ka-turincity in italy
Oko kuthetha ukuba a lawyer kuluncedo ukuba lwabagwebi ukubanceda ukuba yenze isigqibo ngokobulungisa kwaye uncedo umthengi ukwenza kwezabo izizathu Nazi ipapashwe i-uluhlu abaqondisi-mthetho kuba isemthethweni aid ngexesha ngalinye kweenkundla kamasipala wengingqi Wenkundla ka-Isibheno ka-turincity in italy, ezilungiselelwe ngokungqinelana nomgaqo-imiqathango emiselwe ngumthetho amanqaku kwaye Oko clarifies ukuba ngexesha isicelo inclusion kuluhlu ngu wabuza ukuba umntu lo akwazi ukumelana abaqondisi-mthetho uchaze into ngabona subjects apho baya intended ukuba ndibongoze (ulwaphulo-mthetho, zasekuhlaleni, sezolawulo, juvenile, ukuhlola, njalo njalo): yonke into, kunye inqununu injongo ka-nika enye indlela anomdla ukubona uluhlu kunye isiqinisekiso ka-ngakumbi competence ye-elinolwazi kufuneka ekhethiweyo okanye kubonisiweWonke omnye uluhlu sele, nangona kunjalo, i-unitary uphawu, kwaye lawyer ebhalisiweyo Kuluhlu uya kuba unelungelo lokuba - kwimeko - ukukhetha umntu ochaphazelekayo - ukuzithwala ngaphandle umsebenzi kwi-wonke umxholo, nokuba yokuba unabo kubonisiwe owahlukileyo kwaye ethile, intsimi ka-competence.
European foundation kuba ukuphuhlisa iimeko zobomi kwaye umsebenzi
European Foundation kuba ukuphuhlisa iimeko zobomi kwaye umsebenzi i-arhente yomzantsi-european Union ebekwe kwi-i-dublin Isiseko ezijolise ukulawula uphando, zokuhlanganisa ulwazi kwaye unxibelelwano lwe info rich Luxhasa uthotho imisebenzi ka-olulodwa esweni kwaye measuring iimeko Aseyurophu, kuquka: Rhoqo uphando kwi kakuhle iimeko, european umgangatho wobomi kwaye organisational imigaqo-nkqubo enxulumene ukusebenza ixesha (yokuqala uphando kwi kakuhle iimeko waba lwenziwa ngowe, european Foundation kuba ukuphuhlisa iimeko zobomi kwaye emsebenzini uchaza indima yayo kwi eyakhe iphepha ulwazi ngolu hlobo lulandelayo: Ukubonelela vetshe, iingcebiso kunye consultancy - kwi ophilayo kwaye isebenza iimeko, mveliso ubudlelwane phakathi kwaye ukulawula tshintsha Aseyurophu - kuba iqhosha actors entsimini EU loluntu umgaqo-nkqubo kwi isiseko comparative vetshe, uphando kwaye uhlalutyo. Kwaba wabokuqala imizimba yamiselwa ukusebenza ngomhla othile lweqela elisezantsi EU mgaqo-nkqubo European Foundation kuba ukuphuhlisa iimeko zobomi kwaye umsebenzi supervised nge-mlawuli, usekela-mlawuli kwaye ibhodi abalawuliIbhodi abalawuli meets kanye ngonyaka ukucwangcisa kolwabiwo-mali kwaye mgaqo-nkqubo, kwaye yenze isigqibo ngonyaka kwaye zine -unyaka iinkqubo umsebenzi.
Lamagqwetha e umthetho nakwiimviwo
Luka kuwe malunga nayo kule elifutshane webinar
I-bar exam kusenokuba inikezelwe ngabo bonke abo kufuneka zifumane u-iqondo (iklasi, amashumi amabini u) okanye u-mfundisi enomsila (iklasi LMG), ngokunjalo a imfundo ke iqondo omnye umjikelo endala inkqubo kwi-Mthetho, ngokulawulwa ugqibo ka-ixesha amanqakuI-ukubhalwa iimvavanyo ye-njalo i-advocate ingaba bamthwala ngaphandle ngomhla imiba formulated yi-Kubulungiseleli Lobulungisa kwaye apho kuba njengoko zabo injongo iindidi ezimbini umxholo: imbono ye-matyala mthetho. Ingakumbi, ngomhla wokuqala mini kuya kubakho isicelo kuba drafting a reasoned uluvo lwakhe kuyo imiba zasekuhlaleni umthetho, ngexesha lusuku lwesibini a reasoned imbono kummandla, ulwaphulo-mthetho umthetho. Kuzo zombini iimeko uyakwazi ukukhetha phakathi imibuzo emibini ezicetywayo kulo mba ka-ilungelo nto - phantsi le-uvavanyo.
Ngosuku lwesithathu, nangona kunjalo, iya kuba lixesha drafting ka-matyala act ka-ukukhetha phakathi private umthetho, wolwaphulo-mthetho kwaye yolawulo umthetho.
Ngokuqhelekileyo, ixesha ngamnye uvavanyo ngu-iiyure ezisixhenxe.
molo luka, ibe ndiyazi into enye umsebenzi ingaba ngoku
Ukuziqhelanisa ngokubanzi isetyenziswe yi-njalo Commissions ye-lawyer kubonakalisa ukuba ukoyisa ye-ukubhalwa uvavanyo ayikho iqinisiwe kwindawo ethile, isisombululo ye-controversial mba, kodwa ingakumbi ukususela satisfaction ezinye iimfuno kumiselwe ngumthetho unguye. -bis, isiqendu: ikomishoni yokulingana kwenkundla exam ngu composed ka-ezintlanu ezibini, ngamnye ezithe kukho merit amanqaku nganye ngu uvavanyo kwaye nganye isihloko somgaqo-oral uvavanyo.
Kufuneka ungeniswe i-oral uvavanyo lwe njalo a lawyer kuyimfuneko ukuze kuphunyezwe, ezintathu ukubhalwa iimvavanyo, i-kwinto yonke inqaku ubuncinane amanqaku kwaye ingabi ngaphantsi amathathu amanqaku kuba emibini ubuncinane iimvavanyo.
Ukuba abe eligible, kufuneka sifumane i-kwinto yonke inqaku kuba oral exams ka-ingabi ngaphantsi kwe- amanqaku kwaye inqaku ye ngaphantsi amathathu amanqaku kuba ubuncinane ezintlanu iimvavanyo.
Ukumbule ukuba bar exam kusenokuba iphindwe ngaphandle naluphi na usikelo-mda amaxesha kwaye, ke ngoko, ixesha liya kufika xa kuya khona. Eziqhelekileyo iindlela ingaba madala kwaye kufuneka kusoloko gcina abreast kunye kwindawo yentengiso ukuze afumane umsebenzi ukuze okufaneleyo.
Yintoni ingaba ufuna ukwenza i career ukususela scream kwaye ngokukhawuleza ukufumana umsebenzi.
Kubalulekile kuphela indlela lengcaciso ukukhuthaza avvocatucci kwaye oonyana baka-avvocatucci. i-lobby kwaye freemasons Zeentloni. ndiyawazi, euro ngenyanga kodwa ndinqwenela ukuba ushiye ukuba devote ngokwam ukuba umsebenzi njengoko a lawyer, ucinga ukuba. Urhulumente exam kufuneka kucinywa msinyane ebone ukuba useless kwaye expensive, ngokunjalo a inkunkuma ixesha ngcono a ezinzima umthetho senzo. Ndinga kanjalo ufuna mna, njenge nani, ukuze ukwazi tshintsha ezindleleni. I-NJALO APHO ABO UMGWEBI UZA KUBA YAKHO KWIXESHA ELIZAYO COMPETITOR. NGOKUQINISEKILEYO KWABA WAYECINGA KA KWI - EZILUNGILEYO UKHOLO.
Mna anayithathela onikiweyo phezulu kwaye ndiza kunixelela, xa mna-nqapha imisebenzi kwaye ndiza ngcono yaxhobisa kwaye psychologically, mna uswele nto wam"endala"ubomi, yima ngomhla queues ngomhla registry, nje bullying kwi yinxalenye dominus, isiphelo - qhuba-ups ukuba holders ukuze ufumane pittance ka-umvuzo.
ngamanye amazwi: Kodwa lowo wenza kum ukwenza oko.
ixesha, imali, energies, kwaye amadini phantsi drain. kunye inzuzo hindsight Kuba mna, kulo nyaka, ngo, kuya kuba wesine ixesha. Ndiza ukudinwa kwaye discouraged. Ukudinwa angakudlakathisi ngokwasemzimbeni kwaye psychologically. Ndinqwenela onikiweyo phezulu ukuba bekungekuko i-ngaphakathi ilizwi ukuba yells e kwam ukuya ozayo kwaye kuba iqondo eliphezulu frustration apho motivates kum ucinga ukuba ngoko ke, abaninzi incompetent kuba isihloko kwaye mna akukho ukuba yam encinci indlela ingaba kodwa bravina. Mna yamkela iziphakamiso kunye comparisons. Mariya yintoni eyona useless sokufikelela khondo lobungcali-mfundo lilonke lee-lawyer kwaye urhulumente exam ngenxa yokuba opinions asingabo abo quasi-totality beds ngenxa liphezulu inani labantu abathatha inxaxheba ngokumayela ipesenti yenkqu iimfuno zabo zentengiso imiselwe lisebe ebufundisini, kwaye nkqu ukususela kwixesha devoted yi-amalungu ukuba scrutiny efanayo, umgangatho okanye umthamo kwi-khondo lobungcali-mfundo lilonke akusebenzi kuxhomekeka kuba yintoni wena efanayo ngempumelelo sikazwelonke ka - njalo kodwa, zingaphi hearings ukhe ibonelele kwi-eliqalela proticante lawyer. Mat wam istituirei kwi-faculty umthetho lokwenyani iinkundla apho unako-mpikiswano yabafundi imbambano kunye ikhomishini le yinyaniso composed ngokuthi yinyaniso umgqatswa abagwebi ukuze babe kanjalo ukwenza senzo kweenkundla, njalo avoiding inzala ebizwa igcine njengoko unyaka ngamnye ngomhla ergife palace. Obvious ukuba ilungelelanise kubo kunye noko inkcitho lwezibonelelo kwi-imicimbi yoluntu inzala, kunye lwabagwebi elijongene ukuziphatha debates kwi-ngezifundo.
Ngokuqinisekileyo, inani ivaliwe, hayi kuba bonke, ngoku sikulungele ranging ukusuka amahlanu ukuba o iminyaka kwaye phezu kwaye uqeshiwe abo ufuna inyathelo lesi-phezulu ukuya wasters.
Umthetho ifemi abaqondisi-mthetho - Amakhaya, iivenkile, kwaye apartments kuba kukrazulwa - Ads ka-eBay
Ungalibali nika jonga kanjalo yam ezinye listings
Umnxeba kuphela ukuba abachaphazelekayo umthetho Ifemi - nabasebenzi umthetho - ujonge colleague, i-ingcali kuzo nemibutho yabasebenzi umthetho kwaye pension umthetho yandisa umbutho kunye kwi-headquarters ye-Latin kwi-bona ka-Eroma
Oko inikezela vertical, ngenyanga kwentlawulo, sanele ixesha ithuba elinolwazi ukukhula.
Osikhangelayo a lawyer ingcali kwi-drafting ka-izenzo ukuba ingaba lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya kwi-lokulungiselela yokhuphiswano kwi-ezomthetho kunye versatility kwi-civilian kwicandelo lezolimo. Ingcali ke ngoko wonke yinxalenye zasekuhlaleni candelo, nani aza kufakwa kwi-studio kuba yonke imihla komhlaba we-izenzo kwaye ukuziphatha hearings ngomhla Inkundla yengingqi. Injongo yalo advertisement ingaba malunga nama-amakhulu amahlanu umthetho incwadi egcina ii akhawuti, kusetyenziswa ndathengisa bonke kunye njengoko enye stock, apho enye ifenitshala kuba umthetho firms, abaqondisi-mthetho, notaries, accountants. Okubandakanywe ingaba amashumi amabini anesihlanu iibhloko, bins ka-inkulu ubungakanani ukuze ukwazi amisele kwaye bona lula inani iimagazini kuba umxholo, kwaye kulo nyaka. I-iimagazini kuba i-uthelekelelo lobungakanani i classic i-a ikhasi ka-iphepha. Enyanisweni, ngamnye magazine uza iindleko ngaphantsi kwe, euro iisenti ezingama, ilula kwaye inexpensive indlela decorate ngokukhawuleza amathala eencwadi ka-elinolwazi uphando. Ngo phambi kwesi sivumelwano, kuyenzeka kwaye kule meko preferable (ekubeni ngokuphathelele ubude kwaye ubungakanani) kwenzeka ukuqokelela izinto ngendlela umntu ngexesha lam isixeko yokuhlala, kanjalo obaluliweyo advertisement, umzekelo, Velletri (Eroma). Ixabiso kubonisiwe kwi-ukubhengezwa akusebenzi kuquka iindleko weziganeko zeenqanawa (ukuba ikhona) ukuba kuya kubalwa ngokusekelwe umlinganiselo, ubungakanani kwempahla okanye indawo apho ufuna ukuya kufumana kuyo. Ukuba akunjalo kuchazwe ngenye indlela, iifoto ibonise ingaba real kwaye le nto ngqo kwi-ziyathengiswa. Umthetho ifemi (Amashishini kwicandelo lezolimo, Lakers, specialization, ngokwesiqu communications, enew media, telecommunications, ezangasese) Legnano ikhangela a oqeqeshawayo lawyer ukuqala career emva ukuphunyezwa Urhulumente exam. Kubalulekile iimfuno: yokuhlala kufuphi ka-imizamo ayisayi ziphengululwe ukuphakanyiswa kwamagama zabantu resident kwiindawo distant ngaphezu - km ukusuka Legnano), propensity ngakulo yolawulo umthetho. Ikhangela graduates kwi-mthetho, okanye practicing abaqondisi-mthetho kuba imvula indima ngaphakathi umthetho ifemi.
Ingqwalasela: eli unyango kuphela free kwaye elinolwazi
KUBALULEKILE IIMFUNO: KWALO KWAYE BANQWENELA UKUBA Impararcelo studio ifumaneka kwi ariya Piazzale Clodio, ezijolise: Zasekuhlaleni, ulwaphulo-Mthetho, Sezolawulo, Irhafu kunye Nabasebenzi. Kukuba enkulu kangakanani kanjalo kwicandelo kunokwenzeka ingozi kwaye kaxakeka. Akukho reimbursement kuba inkcitho, imbuyekezo njengokuba ipesenti kwi imirhumo enxulumene ukuba elawulwayo. Ayikho ufune osisigxina ubuso kwi-studio. Kwimeko inzala, thumela yakho cv njengoko i-ufakelo ukuba impendulo.
Ukuziphatha ngendlela WASTERS umthetho Ifemi, commercial umthetho kwaye banking, olomeleleyo expansion, ezama kuba expansion yayo izinto ebeziphila abaqondisi-mthetho - omabini sexes - abathe amava-mali zonyaka.
Offresi okulungileyo vertical, imbuyekezo dibanisa zenkohliso zisebenze kuba umsebenzi omhle. Isicelo eli ezibalaseleyo yokubhala kwi-Italian, iingxaki isombulula, inclination ukuba bafunde nzulu kwaye nako ukusebenza ngendlela iqela kwaye ukwazi abathengi nkqu phantsi koxinzelelo. Oyithandayo kwi-indawo yokuhlala brestcity in italy okanye kufutshane kwaye imoto. Isicelo ngqo ukufumaneka Studio Legale Commerciale befuna umgqatswa ukuya oqeqeshawayo lawyer ukusuka ngokusisigxina ziquka yakho umbutho tshati. Hayi, abaqondisi-mthetho sele kunye isihloko ngayo practitioners abathe sele igqityiwe inkqubo esemthethweni senzo. Kufuneka yenza isithuba endlwini Okanye uzame ukwenza yaba kwi-kusetyenziswa kwiindawo zentengiso. Kipili ngu iqonga le-ukubhengezwa apho combines a libanzi assortment ka-izinto ngomhla omkhulu inkxaso inkonzo. Hayi kuphela I-uzama ukufumana umsebenzi okanye indlu entsha. I-ipapashwe advertisements kuquka inikezela yengqesho, izindlu kuba kukrazulwa okanye ukuthengisa kwaye kakhulu ngakumbi.
Ukulandelelana Surgeons kwaye Dentists kwi-Ancona
INTLAWULO YONYAKA IMALI KWI-IMINYAKA ZILANDELAYO kunyaka KA-UBHALISO intlawulo yonyaka ka-enrolment kwi-bhalisa lomthetho ngendlela elandelayo eminyakayesebe eqokelelweyo ngokusebenzisa Ingeniso-Arhente-Kwenkunkuma. apho uya kuyithumela ukuba idilesi ye-isaziso esibhaliweyo intlawulo Kuba intlawulo. nceda landela zilandelayo kwi-isaziso Siya kukwazisa bethu Nabo ukuba lento Ibhunga Ukulandelelana Surgeons kwaye Dentists ka-Ancona uza ukuqokelela ulwazi kwi kunokwenzeka iziphumo kunye okanye achievements zabo Nabo kwaye kanjalo kwi-ingxelo efanayo. ngenxa yokuba ufuna aqonde kwezi indima baya kudlala kuzo zombini society kwaye elinolwazi kwaye umzekelo-icatshulwe kwabo. kwaye umvuzo wabo kubo ngomhla we-Doctor kwaye Dentist"ukuba lisoloko igcine kweyomnga yangoku nyaka.
Road traffic neengozi, Eroma
kwaye umfazi wafa kwi ndawo kuyo nge Donato Menichella
Ukwenza ngcono sebenzisa omtsha site uhlaziye yakho zincwadi ukuba oludlulileyo uhlobo
okanye zama enye kwezi zilandelayo browsers: Le ndawo yinxalenye Isixeko iqela iindaba: siqhubeke ulawulo uyavuma ukuba siqwalaselwe ka-data sentloko lo msebenzi zenkonzo. Uyakwazi kovavanyo ukhetho lwakho nangaliphi na ixesha.
ngokunqakraza ikhonkco Kwi ndawo yobulali amapolisa ka-Roma Eyinkunzi. Umfazi wafa ngomhla Policlinico Tor Vergata emva uthutho kunye ambulance.
kunokwenzeka ingozi yenzekile kwi ariya Giustiniana
ifuthe kumbhiyozo ubude emntla abalindi ngasesangweni kunye lokuqala floor Kwi ndawo Yobulali Amapolisa ka-Roma Eyinkunzi.
Amapolisa kunye Umlilo Brigade ukuba kwangalondlela ye-enne k ubonakala ngathi ngoko nangoko ezinzima. Useless kwi uncedo.
Uphinda-phindo kunye impahla ka-elahlukileyo indalo
intengiselwano, ulwahlulo, okanye ukwahlulwa a septemba)
Kunye nemvumelwano (okanye isigwebo) ulwahlulo iziphumo kwi-ukuchithwa kwezindlu i-communion (nokuba iwonga association of the communion)Nje kungenxa yokuba kubukho isivumelwano (agreement) kwi-ukwahlulwa edibeneyo ipropati (kwaye, eyona imbi kunjalo, inyaniso abachopheli-nkqubo ukwahlula) zinokwenzeka enye izisombululo, okanye no (njengoko i-mere upelo ye-cadastre ka-real estate kwi-town). Ulwahlulo rhoqo lunika iingxaki ukuba banike banyukele iingxaki (ukuba ingaba eguquliweyo i kwi-litigation) xa uzama ukusebenzisa nokwenza ukuchithwa kwezindlu i-communion. Wokuqala ingxaki enxulumene ukwahlula ngu emvelo kwi-uchazo abantu abaya kufuneka bathathe inxaxheba ulwahlulo (okanye ukuchithwa kwezindlu i-communion), uphinda-phindo, kufuneka bathathe inxaxheba bonke co-mhlaba, kukho umbuzo into ixabiso babe a ukwahlula kwenziwa kuphela yi-ezinye co-mhlaba (waza wathunyelwa umnini ngaphandle kuba yayo kunokwenzeka accession). Kwi imeko na uxwebhu lomgaqo-uphinda-phindo, esayiniweyo kuphela yi-ezinye co-mhlaba ebeya kuba isemthethweni uhlobo a mere proposal yongameleyo, nto leyo ekusetyenzwe 'ukuba' kwaye 'xa' kuya kubakho ukwamkelwa bonke co-mhlaba. Kuloyisa obstacle ye-uchazo lwe karhulumente apho kufuneka bathathe inxaxheba kwi ulwahlulo, contractual okanye procedural), kufuneka siqalise ukuba materiare okunokukhethwa kuko (icandelo) izinto kwaye ngeli iqonga kukho iingxaki ezininzi ukuba ingaba kwenzeka. Wokuqala inyathelo ukuze ikwazi ukuqhubeka ukuba ulwahlulo ingaba uchazo lwe isabelo (ithe ngqo) nganye co-umnini, kwaye ukuba lento i-elula kwi-communions 'elula' (apho ukuba iwonga uthi nto isabelo ngu njengokuba ingaphakathi efanayo nganye co-umnini), ngakumbi complex ngu, endaweni ke, ukuchongwa nganye nganye izahlulo kubukho a ukwahlula ekubeni njengoko injongo ilifa elo (apho izahlulo ngamnye indlalifa kuxhomekeke succession ab intestato, ukususela yayo ubudlelwane kunye testator, okanye kwi-succession ngu-uza zixhomekeke, precisely, ngentando testator kuchazwe kwi-iya).
Kunjalo, ukuba akunakwenzeka ukuba awuhlonele unguye
Nto alibabali ukuba kwimeko imbambano kwi isabelo - co-mhlaba kungena isivumelwano i-id okanye quantificativo ka-oyedwa iiyunithi, nge-store of assessment okanye intengiselwano (m. Ingaba ezi ngxaki waqala uyakwazi ukuqhubeka kwimathiriyali uphinda-phindo (okunokukhethwa kuko) ngokufanayo izinto yi-proceeding ukuba ukumiselwa kwebandla i-iziqephu (kukho abaninzi kangaka co-mhlaba) kwaye ixabiso isabelo ngasinye kufuneka thelekisa ixabiso share kwaye, ngokufanelekileyo, akayi zingaphezu ixabiso i-co-ubunini share ngamnye nxaxheba kwi-communion. Umthetho-siseko, lento iselwa linear xa kufuneka iqwalasele ukuba akunakwenzeka kuba holder nge share no omnye ngeelwimi ezine enokuba inxalenye xabiso no omnye (ngaphandle ezikhethekileyo iimeko abaya kunika nobomi m. d. Ukuqhubeka kwimathiriyali ukumiselwa kwebandla i-iziqephu kufuneka ulandele-siseko homogeneity: isabelo attributed ngamnye co-umnini uya ziqulathe zonke izinto langoku kwi-communion (aph. m.m. 'Ngokulawulwa izibonelelo amanqaku kwaye m m, iziqephu kufuneka bamisela kwaye kubandakanywa quantity ifenitshala, real estate, iicredit efanayo indalo kwaye umgangatho, indawo ekuyo into ukuba iqumrhu ngalinye umlinganiso'. Umgaqo we-uniformity ka-ukumiselwa kwebandla i-iziqephu, okanye umgaqo we-indawo ekuyo into ka impahla yexabiso ukuba sisiseko isabelo nokutya ezizodwa (kwezinye iimeko kuphela apparent, njengoko kwimeko apho okulungileyo buza imisebenzi, mathiriyali ukuba abe materially umahlule, kwaye uphumezo ezi imisebenzi, lizaku kucinywa ukuba ixesha emva uphinda-phindo, cinga ityala apho kuyimfuneko ukuba nyusa a ulwahlulo eludongeni). Kukho statutory ezizodwa kwaye isitsho-siseko we-homogeneity kubonisiwe yi-efanayo legislator, amanqaku kwaye m.m. Kukho kanjalo derogations kwi-siseko homogeneity ye-iziqephu ezibangela ukuba ukususela logic (okanye, ngakumbi ngokulula, yi-ithuba). Eneneni, umthetho-siseko homogeneity kusenokuba waived xa-aplikeshini ye-siseko homogeneity ingaba iziphumo a ukumona ilungelo lwe ukuze inxalenye ixabiso proportionally ehambelana ukuba isixa-mali yamiselwa nganye kwi ngokwesiqu, njengoko babe kwenzeka kwimeko nokungalingani ye-izahlulo, kodwa kanjalo xa, umzekelo, fractionation a single ukulunga kuya kuba ubomi ukuba zimbini izinto ixabiso economically inferior ukwenza okulungileyo enye, okanye xa iindleko kuyimfuneko imisebenzi kuba uphinda-phindo ngu disproportionate ukuba ixabiso asethi. Kuyimfuneko ukuba distinguish i-derogations kwi-siseko homogeneity ukususela imathiriyali inkqubo efanayo-siseko, eneneni, sifanele ukucela ukuba kubukho a communion kunye ezintathu co-mhlaba, apho phantsi yamandulo incwadi, zimbini iimoto, kwaye, ekugqibeleni, apartments, kwi-siseko homogeneity isebenza kwi-wonke omnye okulungileyo (kwaye baya kwazi ukuba umkhosi violated umzekelo, ngasentla, hayi ke ukwazi ukuba angakudlakathisi ngokwasemzimbeni zahlukaniswe kwi ezintathu iziqephu, incwadi okanye ezimbini drive), okanye kufuneka isetyenziswe kwi-wedding ye-unyaka ka-ubulungu, imali, ezilungileyo mobile, real estate kwi-yokugqibela hypothesis, umzekelo assumed ngentla, kukho izakuba a communion bamisela yi-zintathu izinto (incwadi endala u-iimoto) kwaye ezintathu real-estate iimpahla (apartments). Kwi ga kubalulekile argued ukuba iindidi apho ingaba umahlule impahla yexabiso zahlukaniswe, ngeenjongo a ehlobo lunye ukumiselwa kwebandla kwiyunithi, ingaba kuphela abo kumiselweyo ngumthetho unguye. m, oko kukuthi abo ipropati, ifenitshala kwaye iimali-mboleko, kwaye ukuba, ngokubhekiselele i-ubulungu izinto kwezi iindidi, koko babe abanye kubo kuba yabelwe kuba yonke quota, kwaye abanye, nkqu ukuba baya kuba ezahlukeneyo iimpawu kwezinye share, ngokulawulwa kuyimfuneko-lungiswe, ukususela ilungelo lwe ukuba inxalenye kwi-uhlobo nganye iindidi izinto kwi-communion akusebenzi consist kwi-realization ye-fractionation ka-quotistico ka-oyedwa amaqumrhu belonging omnye udidi, kodwa iliza elingunxantathu ukwahlulwa ipropati ibandakanywe zintathu iindidi ipropati, ifenitshala kwaye iimali-mboleko, ekubeni ukuphepha i-excessive yahlula ka-impahla yexabiso kwi-communion ukuba ibandakanya ukumona ekunene wangaphambili eminent ka-yokwabelana get kwi-sokugweba yongameleyo, inxalenye ixabiso proportionately ehambelana ukuba elo ilifa, okanye nangona kunjalo complex ufuna ukwahlula. (ngoba, umzekelo, kukho omnye okulungileyo kwi-communion, kwaye lento ukwahlula hluleka), i-co-umnini abo akakwazi ukufumana inxalenye ezilungileyo kuyo indalo (kuquka ngaphakathi communion) kufuneka lunxulumano njengoko i-uhlenga-hlengiso kwi-mali, ukuba bekungenjalo, kufumana ithe ngqo impahla ka-ngaphantsi ixabiso kunokuba yakhe share. Ngokufanelekileyo, luxanduva co-umnini ofumana a indawana nokwandisa ixabiso lakhe share kwi-obligation diversare i-ungqinelwano kwi-idolo abo bafumene indawana thoba ixabiso quota. Ngale ndlela, oko restores ungqinelwano kwi ulwahlulo.
Unikezelo-magama unako kanjalo kwenziwa kwi-intanethi
Njengokuba ezaziwayo, umthetho uhlahlo-lwabiwo-mali kulo nyaka (L.) sele eyandisiweyo, kunye kancinane, irhafu izibonelelo kumiselweyo renovations, amandla requalification kwaye ukuthenga ifenitshala kunye nezixhobo zasekhayaKubalulekile umbuzo ka-deductions ka-varying izixa-mali ukuba kwenziwa ngomhla we-inkcitho ezithe ukuba ukuzithwala ngaphandle umsebenzi okanye ukuthenga i-kukhankanywe ngasentla izinto. Le end, umthetho prescribes ethile indlela kuba intlawulo, apho ngendlela eqhelekileyo iimeko sele ukuba kwenziwa nge ebizwa-dlulisa ukuthetha (a intetho ukuba yinxalenye uyaya made kuba deduction ifenitshala, esathi kamva yaba), ngaphandle kokuba ezizodwa. Khumbula ukuba receipts ye-abalawuli ezithunyelwayo ingaba phakathi amaxwebhu oko kunjalo kufuneka kulondolozwa kwaye exhibited kwimeko ulawulo. Ngoko ke, omnye umba ukulandela kunye ingqalelo kukuba enxulumene ulungise indlela yentlawulo.
Khumbula, kanjalo, ukuba kunye Umjikelezo hayi
Unikezelo-magama yimeko ekhethekileyo ifomu ukukopa, nto leyo ebalulekileyo ukusuka unikezelo kwi-nokuqheleka, apho baya kufuneka kunikwa ezithile data, umzekelo: isizathu intlawulo, kunye ubhekiso kanjalo eliqhelekileyo irhafu ikhowudi ye-beneficiary ye-deduction kwaye irhafu ikhowudi okanye i-VAT inani beneficiary ka-intlawulo. Oko kungenzeka ukuba payer ngu ezahlukileyo ukususela beneficiary ye-deduction kule meko, kubukho zonke ezinye iimeko, baya kuxhamla i-deduction ufumana enye elikhankanyiweyo njengoko beneficiary (bona Circ. Elinesixhenxe ngowama-). Apho ngaphezulu subjects ukuba baxhase inkcitho kwaye wonke umntu uza ufuna inzuzo kwi-deduction, unikezelo kufuneka ziqulathe irhafu ikhowudi bonke. Kwimeko amaqela a condominium, kufuneka njengoko kubonisiwe, ukongeza ukuhlawula irhafu ikhowudi ye-condominium, yezemali phezu kwendawo ikhowudi ye-umlawuli okanye condòmino ukwenza intlawulo (bona zithe bavunyelwe ukuba deduct nkqu apartment izakhiwo ubuncinane simahla ukuhlawula irhafu ikhowudi, njengoko ixesha elide njengoko kufuneka abonise kwi-isibhengezo ukuhlawula irhafu ikhowudi ye-condòmino ukwenza intlawulo kwaye uyakwazi ukunika ubungqina uhlobo condominium ye-imimandla kwi usekelwe bamthwala ngaphandle la manyathelo okungenelela, khangela Circ. Kwi-isizathu intlawulo kufuneka abonise ukuba intlawulo lwenziwa kuba buyiselo lwevangeli lemveli izakhiwo ukuba ukunika ilungelo deduction. Kwimeko apho, kuba ezi zinto impazamo, banikelwe ayilunganga ezinxulumeneyo ebhekisa imali endaweni amandla retrofits okanye usekela kamongameli kwelinye icala, kubukho zonke ezinye iimeko, deduction isenako kuba lunxulumano (Circ. Kukhumbula ukuba normative ezinxulumeneyo uza vary kuxhomekeke deduction kwaye ukuba umahluko phakathi percentages (phambi baba ngamashumi amathandathu anesihlanu kuba ukonga umbane, amahlanu kuba imali) ayikho ke elula simemo kwakhona, ingakumbi emva kokuba utshintsho ungeniswa kwi-lwabiwo-mali act ka. Kwimeko intlawulo iindleko noku kwi-Ngokufanayo abalawuli akufanele kubonisiwe kwi-isizathu kubhekiswa kwi-umsebenzi wokwakha, afanelekileyo imigangatho kwaye kuba kubonisiwe Umasipala njengoko beneficiary kwaye isizathu intlawulo (umz, iindleko izinto eziluncedo, tosap, njalo-njalo.), okanye kufuneka oko kusetyenziswa imodeli ka-unikezelo-magama (Ris. Ngexesha intlawulo, iibhanki kwaye kwiposi kufuneka ukusebenza a withholding irhafu (ukusuka kwi. Ngowama, amounting ukuba) kwi-irhafu yengeniso ingeniso i company ukuba kwemiqolo umsebenzi.
I-obligation waba ungeniswa yi-ummiselo umthetho ka, Isigqibo Umlawuli we-Ingeniso-Arhente, kowamashumi amathathu ngemini juni sele ikhankanyiwe ukuba obligation usebenza ezithunyelwayo enxulumene iindleko amanyathelo okungenelela imali ye-building lemveli kwaye amandla ukugcina amanyathelo okungenelela, kwaye kubonisiwe kanjalo indlela kwesicwangciso ukwaneliseka.
Unikezelo-magama, ke ngoko, usable e Iibhanki kwaye Poste Italiane (kuba lo wokugqibela, sele ikhankanyiwe i-Arhente kunye Umjikelezo amabini anesine, lo gama kuba re-qualification esivunyelweyo osebenzayo ukuvumela kwi-DM.), kodwa ke, njengoko zacaciswa ngesigqibo ithoba ka- (apho siya jonga kuba iinkcukacha), kananjalo ngokuthi intlawulo Amaziko, oko kukuthi ezingama, non-bank-mali amaziko ogunyazisiweyo yi-Banca d'italia ukwenza intlawulo iinkonzo kwi-kanye kwimakethi intlawulo Maziko a nani ungeniswa yi-D.
Intlawulo Ziko kufuneka ukusebenza i-withholding irhafu eks D.
ngokunxulumene indlela kubonisiwe yi-umyalelo we-Umlawuli we-Ingeniso-Arhente, kowamashumi amathathu ngemini juni. Intlawulo Ziko kufuneka kanjalo adhere National Womnatha Kwi interbank wentengiso kwaye sebenzisa inkqubo TRIF, nto leyo yenza exchange ka-data phakathi kubalawuli, kunye nokudlulisela i data kwi-Arhente (obligation yokugqibela, DM amane-omnye we-). amashumi amane amabini anesibhozo julayi, i-Arhente iye ubonise ukuba ezinye clarification kwi indlela intlawulo yerhafu yengeniso (rhafu isiseko ngomhla apho ukusebenza i-restraint, liphele mimiselo ngenxa yokusebenza, njalo-njalo). Unikezelo-magama ayikho alungiselelwe iindleko izinto eziluncedo, amalungelo concessions, iimvume, kwaye izikhalazo ka-ukuqala umsebenzi, withholding irhafu kwi elinolwazi imirhumo, irhafu kunye stamp umsebenzi. Kuba TOSAP lubanele intlawulo ngokusebenzisa yangoku i-akhawunti made ziyabhatalwa ukuba concessionaire zenkonzo, assessment kwaye ingqokelela ka-irhafu. Ezinye imeko ekhethekileyo ufumana enye enxulumene a deduction esilungiselelwe ukuthenga ifenitshala kwaye indlu nezixhobo zasekhaya: kule meko, mesh ngu kancinci ngokubanzi: ukongeza unikezelo-magama, eneneni, kuvunyelwe i intlawulo yi-bank transfer okanye nokuqheleka itsalwa amakhadi kwaye credit amakhadi ingaba ayifakwanga, cheques kwaye imali, okanye ezinye kuthetha ndleko. Kwimeko apho siya sebenzisa kuthetha ndleko ezahlukileyo ukususela unikezelo-magama, kukho obligation ka-restraint kwi-inxalenye iibhanki, i-ofisi kwaye intlawulo Amaziko. Umsebenzi ukuphucula amandla ombane ezisebenzayo, apho deduction kanjalo kuvunyelwe kuba ezingama, holders ishishini ingeniso engekho kufuneka ahlawule kuba ukukopa, somlomo, kwaye ubungqina ukuba iindleko kusenokuba owamiselwa ngo ezinye ezilungele uxwebhu kuba efanayo kulindeleke kwimeko amanyathelo okungenelela yi-ukuqeshisa. Ukuba thatha ithuba i-deduction esilungiselelwe ukuthenga ka-real estate restructured (pursuant ukuba unguye. -bis, co, ye-ofisi kamongameli ummiselo ka-) akuyomfuneko ukuba ufumana intlawulo eyenziwe bank transfer. I-Arhente iye kanjalo kuvunyelwe i-deduction nkqu ukuba ufumana intlawulo eyenziwe i-mali inkampani kwimeko apho i-mali umyinge kuba amanyathelo okungenelela ka imali ye ilifa lemveli ukwakha okanye ukuphucula amandla ombane nokusebenza okufanelekileyo. Ngaba ibalulekile into yokuba le ufumana intlawulo eyenziwe bank transfer, uthetha kakuhle, kwaye ukuba taxpayer sele ikopi bank transfer. (adsbygoogle window. pushCome wathi, ngokunxulumene DM amane-omnye, bank transfer kufuneka abonise isizathu intlawulo, kunye kubhekiswa esezantsi ye rhafu ikhowudi ye-beneficiary ye-deduction kwaye irhafu ikhowudi okanye i-VAT inani beneficiary ka-intlawulo. Ngokunxulumene efanayo DM, deduction ayikho recognised (phakathi kwezinye assumptions) kwimeko non-ukuthobela loo migaqo. Ngenxa yoko, i-Arhente iye ayifakwanga i-admission ka-deduction kwimeko intlawulo ayikho elungisiweyo, ukuba ezichaphazelekayo ngaphandle kokuba umqondiso intlawulo echanekileyo nefanelekileyo (Ris.). Ingeniso-Arhente, nangona kunjalo, kanjalo ungeniswe, kunye Umjikelezo kwaye amane anesithathu, deduction kwimeko apho impazamo ka-unikezelo sele precluded i-oqhuba kakuhle withholding werhafu yi-iibhanki, njalo-njalo, kwaye akubanga kunokwenzeka ukuba phinda unikezelo, ukuba inkampani Umjikelezo kwaye amane anesithathu waba iphenjelelwe nge ruling malunga deduction esilungiselelwe ukuthenga a ibhokisi kuba abahlali (phakathi amanyathelo okungenelela ukuba uvumele deduction, pursuant ukuba unguye.
Kule meko, yena kwafuneka admit, ngeenjongo deduction, intlawulo yi-cheque, attested kwi-notarial mthetho, ngaphandle kokuba nomthengisi bafanele ukubonisa, ukongeza akhethekileyo isiqinisekiso malunga iindleko ibhokisi, anike ingxelo efungelweyo attesting ukuba inclusion izambuku credited wakhe ukuthandwa kwi-akhawunti ye-inkampani ngeenjongo zabo ukhuphiswano i-precise determination ka-umvuzo we-beneficial abanini-mhlaba, ukuba ezaziwayo.
Ngolwazi oluthe vetshe unga khangela isalathiso, yonyaka kwi deductions esikhutshwe yi-Arhente yomzantsi Ingeniso kwaye yonke imithetho amaxwebhu ka senzo ekuthethwe ngawo thina ke silindele kuba na iindaba issuance ye Izikhokelo. MADEX Editore Srl adopts a imodeli ka-ulungiselelo, ulawulo kunye ulawulo pursuant kwi-Mthetho Ummiselo ka.
Yintoni wolwaphulo-mthetho yintoni a lawyer, ulwaphulo-mthetho
kukuba isebe umthetho apho uya kufumanisa kunye repressive amanyathelo, ulwaphulo-mthetho offences kwaye lembandezelo ka-punishments kuba ikhomishini efanayo Umthetho, ke ngoko, akunjalo kuquka naliphi na uhlobo ulwaphulo-mthetho, ukuba hayi ukuba omnye sele precisely yolwaphulo-mthetho kubancedisi kuba regulation of budlelwane nabanye phakathi private abantu, kodwa regulates imigaqo kwaye sanctions kuba repression ethile offences mthethweni (deemed ibe) ingakumbi oko, umahluko akanguye abancinane-akhawunti njenge committing a tort administrative hayi uza zange umgangatho (inxalenye zolwaphulo mthetho yovavanyo nto contested, ikhomishini a ulwaphulo-mthetho emva indictment): ezi iimeko zi ukubaluleka ingakumbi kwi-mba ka-inscriptions kwi-Ubonakala obvious njengoko kunjalo socially mbasa ibe ngaphezulu ezinzima zithe iinjongo, ulwaphulo-mthetho izohlwayo njengoko yolawulo sanctions (ezifana, umzekelo, ukuba imithetho ezindleleni kuba"akukho parking")I-offences ingaba umahlule kwi: lokuqala kukho ngaphantsi ezinzima kwaye ingaba wayesohlwaywa nge kakuhle kwaye arrest, yesibini ingaba ezininzi ezinzima kwaye ingaba wayesohlwaywa kunye imiqathango kunye nokuvalelwa. Oku umahluko sele ebalulekileyo reliefs kunye ezithile kubhekiswa kwi-iqonga kwetyala governed ngomoya: i-mthetho yephondo iye nto iqinisekise ukuba ebizwa-"imeko admissibility"kusenokuba wafakwa kwesandla umsebenzisi. Abo, umzekelo, waba victim a' ukuqinisekisa ukuba Urhulumente, ngokusebenzisa yayo ndlela kwetyala iyasebenza kuba lembandezelo ka-isohlwayo ngomhla iindleko ezinokufumaneka ye owenze enjalo ulwaphulo-mthetho, kwaye ingabi kuphela ukuba, i-code of ritual yenza kunokwenzeka ukuba kunjalo acamngcwe njengokuba ulwaphulo-mthetho, ibe injongo nokuhlola, kanjalo kunye kubhekiswa yayo iziphumo zemisebenzi yokufama kwiindawo zasekuhlaleni mthetho ezinxulumene imbuyekezo, ngokusebenzisa yolwaphulo-mthetho ngokuqinisekileyo umcimbi ka-delicate, ingakumbi ngokubhekiselele kule iziphumo zemisebenzi yokufama kuba.
Johnny Depp tshintsha abaqondisi-mthetho phambi yovavanyo ngokuchasene yangaphambili manager
Esifutshane ka-icandelo lomboniso kwi-elide kwaye tangled isemthethweni idabi ukuba ubona opposite Johnny Depp kwaye ex-managerNjengengxelo Deadline, actor sele ophe abaqondisi-mthetho engundoqo kancinci ngaphezu ezine iinyanga ezintathu ukususela ekuqalekeni inkqubo ye - (alleged) ubuqhetseba millionaire athe umtyholwa Yow kwaye Urob Mandel Ulawulo Iqela (i-TMG). Ngokunxulumene ulwazi yesebe eqokelelweyo yi-site kwaye equlethwe kuwo inkqubo esemthethweni uxwebhu ezenziwe sesi sibini kunye Supreme Inkundla Los Angeles, umthetho ifemi ka-Manatt, Phelps kwaye Phillips sele inikwa ugunyaziso ukuba bakhusele plaintiff kwi-linge, apho aza kuqalisa ngomhla weshumi elinesihlanu umhla ka-agasti. Kanny, Uyohane Gatti, Ubhenjamin G.
Chew, kwaye ezintathu - enye abasebenzi wathabatha phezu Mona Z. Hanna Michelman Robinson I kutheni le-tshintsha ukubetha ayikho gca.
Nangona kunjalo, basenokuba (risky) yiya postpone i-deposition wafunga ukuba Johnny kufuneka ukukhutshwa ekuqaleni kwenyanga ka-meyi. Omtsha yokhuselo ayikwazi ukwenza i-lever kwi kwezityalo ukuze ufake isicelo Enkundleni kuba i-extension. Kwi-uxwebhu oko kubhekiswa kuwo njengoko resigning kanjalo Uadam R. Waldman, Endeavor Iqela, apho sele defended i-actor ukusuka accusations yokuba kugqitywa ngomhla ekufutshane nam ngenxa yakhe bechitha spree ukususela ekuqalekeni controversy nge-TMG. Kodwa ngokunxulumene Deadline, izakuba impazamo, kwaye lawyer iza kuqhubeka amele inkwenkwezi ka-Pirates ye-Eyahlukileyo. Kunjalo, Waldman ihlala umntu ukukholosa ka-Johnny kwi-sizathu amashumi ezigidi dollazi ngokuchasene yangaphambili lawyer Yakobi Bloom studio Bloom. Goodman, abo ngokunxulumene actor uya kuba noxanduva, kunye Urob kwaye Yow Mandel Ulawulo Iqela le-mismanagement ayo, ezemali kunye yemali ungqubano. I-turnover ye-nkqo ekukhuseleni ilungelo abaqondisi-mthetho, Johnny Depp wenziwe a bolt ukususela blue hayi kuphela kuba proximity lomgaqo-nkqubo, kodwa kanjalo ngenxa yokuba wafika nje ezimbalwa kwiiveki kude a nangona sikwimeko yoqoqosho enzima stance omiselwe precisely yi-iqela le Manatt, Phelps kwaye Phillips, ngentsebenziswano ne-Waldman. Nemimoya kweyokwindla, yokuqubha ka-abaqondisi-mthetho sele asivunywanga kwi-lapidary isibhengezo kwi-i-isehlo ephambili ukuba kweyenkanga ngowama- ukusuka kwi-TMG ukufumana ukusuka kwinkundla umyalelo we ukuthengisa isihlanu iimpahla actor kwi-Los Angeles, yi-indlela repayment ka-mboleko ye amahlanu ezigidi dollazi wanika yi-yangaphambili umphathi ukuba 'Ukapteni Jack Sparrow' kwaye apparently zange repaid. Ngenxa Johnny accuses Yow kwaye Urob Mandel ukuba ingaba cheated, ezi yokugqibela kwenza enye naye. Ngokunxulumene ezimbini, actor avume bathe bathobela-mali amalungiselelo vis-à-vis zabo inkampani kwaye bafune behlawule yinxalenye umsebenzi.
Ukongeza, owokuqala umphathi ibango ukuba amane izigidi amatyala ye-Pirates ye-Eyahlukileyo inkwenkwezi bengengabo yintsholongwane TMG, kodwa endaweni yoko ukusuka indlela ubomi ibe exaggerated kwaye phezu phezulu Johnny.
Ngojulayi, inkundla umgwebi Teresa Beaudet ruled ukuba bechitha spree ye-plaintiff ingaba irrelevant ukuba imbambano. Nangona kunjalo, lowo sele inikwa Yow kwaye Urob Mandel malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-kokufaka omtsha isehlo kuba imbuyekezo ngokubhekiselele inkwenkwezi.
Yintoni ukuze ex-manager kufuneka afumaneka ngokuzenzekela kwenzeka.
Okutsha okwenzeke baba kwakucwangcisiwe kuba phambi kwexesha unakho, kunye efungelweyo ka-Johnny, kodwa abandonment ka-ifemi Manatt, Phelps kwaye Phillips (othe hayi bakhululwe nayiphi na ingxelo malunga nayo, ubuncinane, kuba mzuzu) itshintshile amakhadi kwi-ithebhule.
Supreme inkundla intervenes kulo mba ye-liquidation ye-lawyer ke imali emiselweyo
I-lawyer abo defends ngokwakhe yedwa unelungelo reimbursement ka-ezingahlawulwayoNgenxa isemthethweni imbuyekezo ye-isigaba ka-unyango nkqu ukuba awunalo bamthwala ngaphandle kophando. ezenziwe sesi sibini a isaziso isibheno, kwi isiseko ezimbini izizathu, supreme inkundla ngumngeni umyalelo wenkundla ukuba, emva ekubeni yamkela yeqela eliphikisayo yena ezenziwe sesi sibini ngokuchasene ummiselo wonyaka ka-septemba imbuyekezo yena linelungelo kuba defensive umsebenzi lwenziwa ngowe-idolo ye-sig. R, eligible for isemthethweni aid ngomhla iindleko ezinokufumaneka Yombuso, ayiphumelelanga lungelelanisa iindleko isihlalo yeqela eliphikisayo, kunye indlela yokwenza 'nto kuba inkcitho. ummiselo ngu-boolean kuba ukusilela pronounce kwi iindleko yeqela eliphikisayo kwaye kuba utyeshelo lomgaqo okanye ubuxoki kwemichiza unguye. yokuba umfaki-sicelo ngowamashumi isihlalo ubuqu ingaba ukuba lilwalele ilungelo reimbursement ka-inkcitho kwaye lonke ityala lesi ka-imbuyekezo kuba elinolwazi umsebenzi bamthwala ngaphandle, abachopheli-matyala sele erred kwi-quantifying i-yomvuzo ngenxa esemthethweni, apho uya saliwe i-ukuhlawulwa lonke uphando iqonga kwaye kwetyala, njengoko engafikanga sele bamthwala ngaphandle, i-oral ubungqina kwaye engafikanga sele wabeka kwi-CTU. A) lokuseka 'nto kwi iindleko' kunyhasha-siseko ukuba kunjalo ukuba lawyer sele exercised ilungelo mna-nkqo ekukhuseleni ilungelo wabeka phantsi unguye.
m, awukuchaphazeli elinolwazi uhlobo umsebenzi bamthwala ngaphandle zabo idolo, kwaye, ke ngoko, ingaba ukuba lilwalele ukuba inkundla kufuneka wahlala yakhe ukuthandwa, ngokunxulumene imithetho acquiescence, kwaye xa isiseko elinolwazi imirhumo, amalungelo kwaye imirhumo kumiselweyo yayo yokusebenza (kuquka reimbursement ka-inkcitho) B) njengoko malunga yesibini emhlabeni ka-isibheno, isigqibo inkundla kunyhasha izibonelelo D.
ka, unguye, isiqendu, (c) oko kuquka, esa kundoqo iqonga a plurality imisebenzi eyenziwa emsebenzini ngakumbi kunokuba ugqibo ye-oral iimvavanyo kwaye OTC, kubandakanywa iimfuno uvavanyo kwaye memoirs, illustrative okanye clarification okanye ukongeza le mibuzo, apho referring inkundla kuya kufuneka ukuba ascertain ukuba unayo okanye abanalo sele zenziwe.
Web ziza kuba abaqondisi-mthetho kunye nomthetho firms"Websites, abaqondisi-mthetho
Sisebenzisa encinane-arhente esekelwe kwi-Venice, specialized kwi-realization ka-web ziza kuba iingcali Kwaye bamele strictly respectful ye-elinolwazi zokuziphatha Zonke zethu web zephondo ingaba landscaped kwaye constructed kunye okhethekileyo technique evumela amaphepha ukuba adapt ngokuzenzekelayo ezahlukeneyo izixhobo apho baya iboniswaFluid grids, flexible imifanekiso, kwaye media nemibuzo kuvumela i-ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka ukubonisa kwi ii-ezahluka-masi, zezikhumbuzo, omabonakude, cell phones kunoko sizukulwana, web kwaye i-tv, ekupheliseni umsebenzisi ke kufuneka ka-utshintsho lwesayizi kwaye tye upelo iwebhu amaphepha. Thina ukuphuhlisa isandla ngendlela eyodwa uyilo kwaye ezicocekileyo ikhowudi kwaye bale mihla kwi-adherence kunye imihla inyaniso ka-web kwaye mobile uyilo. Ngapha ukusebenzisa iilwimi HTML, CSS, kwaye PHP, siya kunikela zonke kakhulu nje iindaba enxulumene uphuhliso kunye nendalo web-aplikeshini. I-uyilo enzima, structural kwaye imizobo na web site ngu ukugcina ngeliso kwi-incopho ka-imboniselo ka-umsebenzisi. Faka Uyilo, loads ngokukhawuleza, web usability kwaye web responsive ingaba izikhokelo zethu emsebenzini Silvestrine yi CM olusetyenziswa yi-oorhulumente, iinkampani kwaye non-inzuzo organizations jikelele ehlabathini. Kuyinto iqonga ihlale ngexesha elingelilo lokuhlala ukuze zithanda web ababhali kuba yayo wawuphungula yokusebenzisa. Ngokusebenzisa inkqubo WYSIWYG kwaye nolahlo, abahleli ye-site bamele kuba enamandla kakhulu kwaye intuitive papasha isixhobo kuba web ngaphandle kwesidingo lokwazi i HTML ulwimi: ukuba usebenzisa ezenzeka ilizwi isilungelelanisi ke sele uyazi ukuba ukusetyenziswa Silvestrine. Omtsha ka-site Web Zephondo abaqondisi-mthetho wenziwe yenzelwe kunye Adobe Photoshop kwaye kwasetyenziswa ngesandla usebenzisa Espresso kwi-ima. Kule ndawo zenza ngokupheleleyo responsive, adapting ngokwayo ukuba icebo kunye othe wena jonga kulo.
Kubhaliswe Ukuqeshisa: incwadi echazayoquery
ezine iifoto kwi omabini, kuba akukho
Kufuneka mna bhalisa isivumelwano ka-mboleko kuba ukusebenzisa ipropati, njengoko ndifuna qhoboshela iifoto ka-imeko premises ngexesha kweenkonzo kwi-comodatario, kwi yokugqibela, mna kufuneka affix i-stamps kwaye ngubani ixabiso(nkqu ukuba irrelevant ukuba precise ukuba kwi-ikhasi ka-i-a iphepha, mna ukuba ingaba akukho. ye-comodante, kwaye comodatario kufuneka kuphela zijongwe yi-attendant ukuba kokubhala Nengeniso-Arhente okanye ehamba nale leta.
isibini amakhasi). C. kwaye C F
Ukuba kufuneka amkele enye indlela iifoto. Ulinde nika impendulo, mna kufuneka kwiintsuku ubungqina ngayo, ndiya kunikela ecacileyo greetings.
Osisigxina inkundla arbitration
Enye januwari, inani arbitrators kwi uluhlu waba
I-osisigxina Inkundla arbitration sisivumelwano samazwe ngamazwe umbutho waseka ngowe- ukuze kuphunyezwe isisombululo ka-disputes phakathi ilungu statesI-amatyala igqunywe umqolo ngeendlela ezininzi imihlaba kuquka demarcation ka-imida kwi ilizwe kwaye elwandle, sovereignty, amalungelo oluntu, ngamazwe utyalo-mali norhwebo langaphandle imicimbi kwaye sangaphakathi. Sele yayo headquarters kwi-Hague kwi-Netherlands, ngomhla Uxolo Palace, awathi kanjalo izindlu yamazwe ngamazwe Inkundla lobulungisa kwaye Academy of wamazwe ngamazwe. I-unye ka-inkundla ukuba ingaba zikhathalele i-arbitrations ngamazwe akazange entsha, eneneni lokuqala ixwebhu imizekelo nkqu khangela emva ukumkani Udariyo ka-Persia. Kamva, ngexesha armistice amathathu iminyaka C. phakathi kwe-Atene kwaye Sparta, wamisa efanayo umzimba ukusombulula disputes phakathi ezimbini izixeko. Ziphakathi Iminyaka, indima intermediary phakathi u-mandla, kwaba incumbent kwi-pope, nangona kunjalo, kwakungekho njl malunga yokuba yayo verdicts baba mbasa ukuba abe bophelela okanye ngokulula icebiso abalawuli. Kwi-NINETEENTH century kuba ixwebhu eziliqela iimeko apho i-nkqubo ka-arbitration waba kusetyenziswa ukusombulula ngamazwe disputes phambi outbreak ka-hostilities. I-unye a osisigxina inkundla waba ungeniswa kwi-isivumelwano phakathi republics ka-Latin Emelika ne-United States. Kanjalo stipulated ukuba inkundla arbitration ayikwazi hlalutya le disputes phakathi kwezizwe, ngoko ke njengoko ukunqanda ungquzulwano. Emva Lokuqala tan-i-american Kwenkomfa comment ingxwaba, kwi isibheno ukuba inkundla arbitration waba eyandisiweyo na imbambano ukuba pertained 'yesizwe imbeko kwaye vital izinto ezichaphazela kwimo'. Kwaba kuphela ngexesha Hague inkomfa ka, elamiselwa phambi kokuba Inkundla arbitration kwi-global inqanaba. Umsebenzi ka-ekumiseleni Inkundla washiyeka ukuba umphathiswa Langaphandle Imicimbi Enetherlands de Umasipala, owaye mbasa inani izizwe bathathe inxaxheba ngokwaneleyo ngoseptemba, kwaye, ke ngoko, convoked intlanganiso yokuqala, ithoba epreli, ngenjongo appointing i-amagosa. Le ntlanganiso ngenxa kwi-ukuqeshwa entsha, unobhala-jikelele R. Melvil, Baron van Lynden Oku kwaye zonke ezinye iintlanganiso de agasti ka- baba igcine kwi palace ye-Hague de inkundla bafudukela apha kwi-Uxolo Palace. Phakathi kwe- kwaye, inkundla waba zange convened, inspiring satirical cartoons ukuba yabonisa isakhiwo ngaphandle sebenzisa kuba ziyathengiswa. Kunye end Omkhulu Imfazwe, Osisigxina Inkundla Arbitration waba yinxalenye league Yezizwe, ngokutsha waseka kunye umnqweno ukuseka i-umbutho kunye ngakumbi iinkalo zobuchule kwaye ngaphezulu reliable. Yesibini ixesha inactivity wenkundla, phakathi kwaye, lowo wamngenisa ezininzi ingcaphephe kwi-wamazwe ngamazwe ukuba buza kuba abolition. I-enye proposal wayeza kusibuyisa kwi inkundla ukuba ingaba yaba yayikukwenza ukusombulula disputes phakathi states kwaye private abantu.
Nangona kunjalo, akukho nanye kwezi iziphakamiso waba ngempumelelo kwaye Inkundla igcine enye indima ebalulekileyo.
Ilt redici oktobha, kwaba awarded ubume nakanye kwi UN jikelele yowiso-mthetho. Ishumi elinesibhozo oktobha kwaye kweyedwarha baba igcine ezimbini iziganeko ukuba commemorate, ngokulandelelanayo, centenary inkomfa ka, kwaye unikezelo ye-umbutho kwi-Uxolo Palace.
Kuphela osisigxina ezibini Wenkundla ingaba yamazwe ngamazwe Bureau of the chancellery, Ibhodi abalawuli osisigxina, arbitrators wonyulwa yindlu States amaqela ukuba Hague Sivumelwano, kwaye ekugqibeleni uluhlu imithetho nkqubo.
Kuba oku umba yindlela ebalulekileyo kwi-Ngamazwe Inkundla Lobulungisa omnye umahluko kukuba yokuba i-iiseshoni ye-Osisigxina Inkundla Arbitration igcine yangasese kwaye ingaba ziyimfihlo. I-CPA ayiyo 'inkundla' ngendlela efanelekileyo intsingiselo ixesha, kodwa i-administrative umbutho kunye imbono ka ekubeni osisigxina kuthethwa ngala afumaneka ngokuzenzekela ezikhoyo ukukhonza njengoko bhalisa ngamazwe arbitration kunye neminye enxulumene nemigaqo-nkqubo, kuquka commissions ka-inquiry kwaye conciliation. Inkundla ayikho inkundla arbitration okanye isivumelwano, kodwa ngokulula uluhlu abakhethwe ngabo States amaqela ukuba i-convention, awathi ngabo States amaqela ukuba imbambano unako khetha arbitrators onikwe kunye yesisombululo sebenzisa uncedo a iqumrhu lolawulo'. Ibhodi abalawuli yindlela umzimba composed bonke diplomatic abameli ka-ilungu States ogunyazisiweyo kwi-Enetherlands. Kubalulekile chaired yi-Dutch Umphathiswa langaphandle imicimbi, ngubani kanjalo ilungu, kwaye composed yi-diplomatic agents ye-States iqela i-Convention, ogunyazisiweyo kwi-Enetherlands. Ibhodi inoxanduva lokulawula kuka yamazwe ngamazwe Bureau, uhlahlo-lwabiwo-mali ye-umbutho kwaye ingxelo kwiqela imisebenzi. Lwabagwebi okanye arbitrators abo kuva iimeko zibizwa ngokuba amalungu Inkundla. Ilungu ngalinye Likarhulumente angatyumba ukuya kwi sine 'ezilungileyo competence kwi-imibuzo yomthetho wamazwe ngamazwe, obukhulu kwendlela reputation kwaye zilahliwe amkele imisebenzi arbitrators kuba ohlaziyekayo ithuba ezintandathu ubudala. I-arbitrators ngamnye ilungu Urhulumente kunye ifomu a 'iqela lesizwe'. Lwabagwebi zibe ekhethiweyo kwi iimeko arbitration apho CPA inika inkxaso. Amaqela Wesizwe, unako propose candidates kuba amalungu Ngamazwe Inkundla Lobulungisa. I-CPA ngamanye amaxesha ubhideke kunye ngamazwe Inkundla lobulungisa, oko sele yayo headquarters enye yokwakha. I-CPA, nangona kunjalo, hayi inxenye ezimanyeneyo indlela, nkqu ukuba ingaba ubume nakanye kwi-jikelele yowiso-mthetho ezimanyeneyo ukusukela ngo. I-Administrative Ibhunga ingaba icandelo likarhulumente ukuze alawule, kwaye supervise umbutho, sele ngokukodwa i-administrative umsebenzi kwi-ulawulo yamazwe ngamazwe Bureau, ingakumbi kwimiba ngemiba imivuzo kwaye kolwabiwo-mali, kanjalo kuzoba phezulu ingxelo yonyaka kwi imisebenzi Amagunya amaqela nemvumelwano. Layo umsebenzi ilawulwa ngumthetho Imithetho umgaqo-nkqubo we-Administrative Ibhunga ikuvumile Hague, nineteen kaseptemba. Ibhodi ngu composed ka-diplomatic abameli ogunyazisiweyo yi-ngamazwe Iinkomfa kuba noxolo kwi-Hague.
Ngowe, zilithoba states inxaxheba ukumiselwa kwebandla i-icandelo likarhulumente, oko utyumba Unobhala-Jikelele, intloko ngamazwe Bureau kwaye Ummeli Wenkundla.
Nganye States amaqela ngu eliphetheyo ukuba onyule ubukhulu ka-ezine referees Wenkundla. Amagama abo bamele kubonisiwe kwi-uluhlu ngokulinganayo! phezulu yi-Bureau, isithuba seminyaka emithandathu ubudala, ngaphaya apho zabo ugunyaziso zibe ukuvuselelwa. Kubalulekile ukusuka olu luhlu ukuba arbitrators ngasinye ethile meko kwi umbuzo abakhethiweyo. Kwaba sele kuchazwe njalo kumgaqo-Statute ye league Yezizwe ukuba candidates kuba lwabagwebi le inkundla esiqwalaselweyo kuluhlu linikelwe 'wesizwe amaqela' (ukuya kwi-ezine arbitrators esikhethiweyo nganye yi-imo) Osisigxina Inkundla Arbitration. Enye ihlala isebenza yamazwe Ngamazwe Inkundla Lobulungisa, amalungu apho zona, enyanisweni, esikhethiweyo yi-Jikelele yowiso-mthetho kunye Nokhuseleko Ibhunga kuluhlu linikelwe yesizwe amaqela kwi-Osisigxina Inkundla Arbitration. Amalungu Osisigxina Inkundla Arbitration unako kanjalo propose candidates kuba le-Nobel prize kuba Noxolo. Yamazwe ngamazwe Bureau, namakhaya yi-Unobhala-jikelele we-Osisigxina Inkundla Arbitration, ibonelela isemthethweni inkxaso, enzima kwaye sezolawulo, maintains kwamaxwebhu kwaye igosa isiqhagamshelanisi ka-unxibelelwano. I izinto - ye-Hague Inkomfa ka, kuba uninzi inxalenye ngokusekelwe wangaphambili ezikhoyo izivumelwano phakathi states, ochaziweyo imithetho nemigaqo-nkqubo ka-arbitration. Le migaqo baba ya ngowe-: ekudalweni a esenziwe lula inkqubo elula kuba iimeko ngu engundoqo ukwenza inguqulelo entsha. Baba ke esetyenziswa kwi- ke kwi-Osisigxina Inkundla Ngamazwe Ubulungisa. Kwindawo yokuqala, amaqela uyavuma ukuba ebizwa-'urhwebo-offs', apho kuvakalisa imisebenzi namagunya arbitrators. Inkqubo esemthethweni umgaqo-nkqubo iqulathe ezimbini izigaba zawo: ukubhala isicelo kwaye verbal ngxoxo. Ngexesha lokuqala yinxalenye umgaqo-nkqubo, agents kwaye abaqondisi-mthetho ukuqokelela, faka amaxwebhu kwaye ubungqina abaxhasayo alo mmandla. Kwisahluko sesibini kude kube yi-oral ngxoxo-mpikiswano phambi kokuba Inkundla, abo retired ekupheleni ngxoxo, kwaye lugqiba yi-uninzi isihlalo. I-ukubhalwa isigqibo ukuba ibandakanya izizathu dissenting imbono ye-minority ye-arbitrators, esayiniweyo ngumongameli kwaye yi-unobhala (phambi yi-arbitrators), kwaye kubalulekile ukufunda ukuba amaqela ngaphandle isibheno.
Nangona kunjalo, kuyenzeka ukuba get siyijonga kwimeko - discovery ezintsha ubungqina uhlobo ngu decisive phakathi isigaba yengxoxo-mpikiswano kwaye isibhengezo ye-verdict.
I-admission ye-kovavanyo isicelo, kwaye wonke isigqibo banikwa Enkundleni.
Ingaba kuchitha ukumisa ixesha ngaphakathi apho zibe zaziswe ukuba siyijonga umbuzo. Ezi imithetho wabeka phantsi inqaku, animatedly debated yi-Wesithathu Ikomiti ngowe. I-Osisigxina Inkundla arbitration inika inkxaso iimeko disputes ukuba ingaba bamthwala ngaphandle ngokunxulumene imigaqo wezizwe ezimanyeneyo Ikhomishini kwi-ngamazwe urhwebo umthetho, okanye UNCITRAL, apho involve njengoko amaqela States, ombuso okanye governmental organizations. Kwimeko apho ukuba amaqela kusilela lokonyula arbitrators, Nobhala Osisigxina Inkundla Arbitration unako mthetho njengoko abasemagunyeni invested kunye amandla idinga. Inkundla inako kuphela esikhethiweyo kwi iimeko disputes okokuba ukuwa phantsi ezimanyeneyo Convention on umthetho kolwandle (UNCLOS). Inkundla ithe ngqo yanikezela zonke iimeko disputes, UNCLOS, ngaphandle kokuba omnye. I-PCA sele initiated ngo- i-project aimed e ukwenza set of arbitration imigaqo apho kuhlangana izikhankanyi ka-settling ngamazwe disputes kwi isithuba oko kukuthi extra-atmospheric. Eneneni, kubekho enye indlela yokusombulula le uhlobo imiba ukongeza kwi-ndlela esekwe Eyimali Convention, apho akavumeli ukuthatha inxaxheba non-ombuso.
Baba ke promulgated isithandathu disemba inkqubo Eyodwa Imithetho kuba Arbitration ka-Disputes malunga Ishishini ka-Extra-atmospheric.
Abazange baqonde okokuba injongo ezingaphezulu umsebenzi ka-imozulu ziquka hayi kuphela kwezo meko kuba disputes phakathi kwezizwe, kodwa kanjalo phakathi private abantu.
Ingaba States abathe acceded ukuba omnye okanye zombini Hague conventions ka- kwaye.
Ilungu ngalinye Likarhulumente angatyumba phezulu ukuya ubukhulu ka-ezine abathunywa, abo kwenziwe imisebenzi arbitrators. Bamele endinako a libanzi iinkalo zobuchule entsimini komthetho wamazwe ngamazwe, eliphezulu kwendlela reputation kwaye kufuneka uzimisele ukwamkela izibophelelo ye-arbitrators'. Oku inxalenye uluhlu: Inkundla ingaba enyanisweni thatha izigqibo ezikhoyo electronically zonke iimbali enxulumene iimeko examined kwixesha elidlulileyo. Phakathi kwe- kwaye, uhlahlo-lwabiwo-mali kuba Inkundla kwakukho omnye nineteenth century I-mali kuba Inkundla ingaba ukususela imirhumo amalungu ayo, kwaye yi-imirhumo ihlawulwe yi-amaqela kuba iimeko ukuba arbitration.
I-fixed iindleko ukuba ilungu ngalinye urhulumente kufuneka ahlawule nganye ngokusekelwe kwindlela ye-Jikelele Yeposi Union.
Nawuphi na umntu ucela arbitration kufuneka ahlawule indleko ukulungiselela inkundla, kuquka imivuzo ye-referees, iindleko kuba hluleka, kwaye imisebenzi yolawulo, kodwa hayi jikelele inkcitho ye-umbutho. Iindleko vary ukusuka meko ukuba kunjalo, kwaye zibe nomcimbi ka-negotiation phakathi Osisigxina Inkundla Arbitration, kwaye amaqela ityala.
Umbuzo yentswela-ngqesho: iimfuno, imali, ixesha
Njani ukuze ufake isicelo sephepha-ngqesho kwi Umbuzo yentswela-ngqesho, kufuneka singeniswe zingaphelanga iintsuku ezingama- ukusuka ilahleko umsebenzi Umbuzo ukuba buza kuba intswela-ngqesho, kufuneka ithunyelwe exclusively kwi-i-automated indlela, ngokusebenzisa i-website ye-Inps. Ukuze kwenziwe iindlela ezilungileyo, kufuneka ube kwi-ulawulo ye-Pin icebo Kwimeko apho wena musa kuba ulawulo, ungaya ibhodi kwaye ukuba abe wakhokela kwi-iindlela ezilungileyo isicelo
Ukuba isicelo isibonelelo yentswela-ngqesho ingaba ngenye indlela elula, mna schematizziamo ukubonisa wena kunye clarity imeko: Ukuze ufake isicelo kwaye ufumane-ngqesho kwi, nangona kunjalo, kufuneka ukuba babe kwi-ulawulo lwazo ezinye iimfuno, ukongeza ilahleko umsebenzi.
Lo msebenzi kufuneka eneneni kuba free nayiphi na imisebenzi, kuquka occasional, ngamaxesha athile, okanye occasional. Kufuneka kanjalo kubekho ngoko nangoko ezikhoyo ukwenza ezinye umsebenzi, yi-lingenza ukuba CPI afunekayo amaxwebhu, kwaye, ngaphezu kwazo zonke, ukuze abe esebenzayo kwi-funa umsebenzi omtsha.
I-unemployed kuya kufuneka ukuba kuvela umntu ngexesha Umsebenzi Centre, equipped kunye zilandelayo amaxwebhu: ngokubhekiselele kule ukubalwa isixa-mali ka-ngqesho izibonelelo kufuneka hlula ewonke umvuzo kwaye imivuzo taxable kuba yokhuseleko lwezentlalo ngeenjongo kwi-yokugqibela emine kuba inani leveki ye igalelo, kwaye uphinda-phinda quotient ngoko ke ezizuzwa inani.
Intswela-ngqesho inzuzo kwi- no- lomgaqo-ngenyanga yomvuzo ezibangela ukuba ukususela enjalo intengiselwano ukuba enye into enganeno okanye ilingana no, euro. Ukuba umvuzo exceeds oku sum, nangona kunjalo, isixa-mali-ngqesho inzuzo- no ka-enjalo isixa-mali, nto leyo wongeza a sum no amabini anesihlanu yahlukile phakathi ngenyanga umvuzo kwaye kuchazwe ngasentla isixa-mali. Intlawulo yi qho ngenyanga kwaye wonke ye-Cheques ukuba Usapho Nucleus, ukuba oko kuyimfuneko, kwaye ziyabhatalwa. Ixesha eliqhubekekayo-ngqesho inzuzo kwi- kuxhomekeke igalelo imbali lwabasebenzi basefama, akavumelekanga ukuba nawuphi na ityala zingaphezu emva kweminyaka emibini. Ingakumbi, obona bude ilingana nesiqingatha weeks ukhuselwe igalelo kwi-emine ngaphambi imini ilahleko yengqesho. Iinkcukacha ezininzi, abafundi banako jonga isikhokelo ngokukodwa abazinikeleyo ukuba yobalo ye-Naspi I-Reels, njenge naliphi na uhlobo igalelo kuba intswela-ngqesho kuphela xa umsebenzi sele waqwalasela ngemihla imali evunyelweyo athe linelungelo, ukuqala entsha umsebenzi, ayisasebenzi ubonakala uluhlu yentswela-ngqesho okanye abe ngumnini-pension.
Masiko iintlawulo kwi-China - Kangakanani ingaba mna ahlawule Masiko ukuba ndiza kuthenga kwi-China - sokubala iirhafu masiko-intanethi